“ဒီလို ေယာက်ၤားမ်ိဳးနဲ႔ေတြ႕ဆုံတဲ့ အခ်ိန္မွသာအိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားပါ“ – ျမန္မာသတင္းစံု
၁။ဦးစားေပးမႈမွာ သင္ကနံပါတ္တစ္ပဲ ။
အလုပ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ျဖစ္ေစ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းၾကားမွာ ျဖစ္ေစသင္နဲ႔ယွဥ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးရွိလာခဲ့ရင္သင့္ကိုပဲ ပထမဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္မယ့္သူမ်ိဳးပါ။သင္ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊က်န္းမာေရးကိုလည္း သူကအၿမဲေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါပဲ ။ဒီလို ေယာက်ၤားမ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့အခ်ိန္မွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားပါ။
၂။ရင္ဖြင့္စကားေတြနားေထာင္ေပးၿပီး အၿမဲအားေပးသူမ်ိဳး ။
သင္က ရင္ဖြင့္စရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ သင့္မ်က္ႏွာမွာ အလိုမက်တာေတြ႕ရင္ သူက ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာကို သိႏွင့္ၿပီး သင့္မေက်နပ္ ခ်က္ေတြကို ေမးမယ့္သူမ်ိဳးပါ။ သင္ရဲ႕အခက္အခဲေတြမေက်မနပ္ဆိုလာတဲ့ ရင္ဖြင့္စကားေတြကိုဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ေပးၿပီးအႀကံဉာဏ္ေပး မယ့္သူမ်ိဳးပါ. ။
ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ဖို႔ လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ဘဝဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တစ္ေယာက္ထဲရင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ သင္က စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္တဲ့ မိန္းကေလးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ တစ္ေယာက္ထဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို
႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာသူ ကသင့္ေရွ႕ကမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးမွာပါ။သင့္ရဲ႕အခက္အခဲေတြကိုအားနည္းခ်က္လို႔ အျပစ္မျမင္ပဲသူဘက္က ကူညီခြင့္ရတဲ့အတြက္ေတာင္ဂုဏ္ယူဦးမယ့္သူပါ ။
၄။သင့္ရဲ႕စိတ္ကို သိေနတဲ့သူမ်ိဳး ။
သူက သင့္ကိုအရမ္းခ်စ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္သင့္ ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ ကိုအၿမဲသိခ်င္ေနတဲ့ သူမ်ိဳးပါ။ သိဖို႔အတြက္ အၿမဲလည္း အကဲခတ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင့္ဘက္ကလိုအပ္ခ်က္ရွိ လာတဲ့အခါမ်ိဳး မွာေတာင္းဆိုစ ရာမလိုပဲ သူ႔အသိစိတ္ နဲ႔သင့္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို သိႏွင့္ၿပီးသား၊ လုပ္ေပးႏွင့္ေနၿပီ းသားျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္ ။
တခါတရံ လက္ေဆာင္ေတြ အစားအေသာက္ေတြ ဝယ္လာေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးက်ရင္ သင့္အႀကိဳက္နဲ႔ထပ္တူ ညီေနတာမ်ိဳး ရွိေနတတ္ တာေတြက တိုက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕အႀကိဳက္၊သင့္ရဲ႕စိတ္ကိုသိၿပီး အေသးအဖြဲ႕ေလးေတြကအစ ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ သူမို႔ပါ ….. ။ဒီလို ေယာက်ၤားမ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့ အခ်ိန္မွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားပါ။
၅။သင့္ခႏၶာကိုယ္မွာသင္မလွပဘူးလို႔ထင္တဲ့အရာေတြကိုလည္းသူက ခ်စ္ေပးတဲ့သူမ်ိဳး ။
သင္က လွပတဲ့သူတစ္ေယာက္မို႔သူက ခ်စ္တာ မဟုတ္ပါဘူး သင္က ဗိုက္ပူခါးတုတ္ေနေနရင္ေတာင္သူကအဲဒါေလးကို ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ထင္ေနတဲ့သူမ်ိဳးပါ။ သင့္မ်က္ႏွာမွာ ဝက္ၿခံေတြမ်ားေန လို႔မွန္မၾကည့္ခ်င္ ဘူးဆိုရင္ေတာင္သင့္ကို သူက တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနၿပီး ဝက္ၿခံေလးေတြကိုေတာင္ မွဲ႔ေလးေတြလို႔ျမင္ေပး မယ့္သူမ်ိဳးပါပဲ …။
အထိမ္းအမွတ္ေန႔ရက္ေတြ၊ဥပမာ-ဘြဲ႕ယူတဲ့ေန႔မ်ိဳးမွာသူကသင့္နဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းခ်င္တာပါ။ သူက စိတ္ညစ္စရာအရာေတြသာသင့္ကို မေျပာျပခ်င္ေနမယ္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာကိစၥ ဝမ္းသာစရာကိစၥေတြ ရွိလာတဲ့အခါက်ရင္
သင့္ကို ပထမဆုံးေျပာျပၿပီး အေပ်ာ္ေတြကို အတူတူမွ်ေဝခ်င္ တဲ့သူမ်ိဳးပါ။ အဲလိုေကာင္ေလးမ်ိဳးကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးရင္ သင့္ဘက္ကလည္ းအျပည့္အဝနဲ႔နားလည္မႈ ေပးႏိုင္တဲ့ခ်စ္သူ မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို ႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။
မူရင္းေရးသားသူအားေလးစားစြာျဖင့္ Credit ေပးပါတယ္
“ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ“
မိန်းကလေးတိုင်း ဟာအချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းချင်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ ဂရုစိုက် မှုပေးနိုင်ပြီ းသစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ ပဲဆုံဆည်းချင် ကြပါတယ် ။အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးမျိုး ကိုရထားပြီးပြီဆိုရင် သင်ဟာပတ်ဝန်း ကျင်မှာရော သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းကြားမှာပါသင့် ကိုဝိုင်းပြီး အားကျရ မယ့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
၁။ဦးစားပေးမှုမှာ သင်ကနံပါတ်တစ်ပဲ ။
အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်စေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာ ဖြစ်စေသင်နဲ့ယှဉ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးရှိလာခဲ့ရင်သင့်ကိုပဲ ပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မယ့်သူမျိုးပါ။သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ကျန်းမာရေးကိုလည်း သူကအမြဲစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးပါပဲ ။ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။
၂။ရင်ဖွင့်စကားတွေနားထောင်ပေးပြီး အမြဲအားပေးသူမျိုး ။
သင်က ရင်ဖွင့်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ သင့်မျက်နှာမှာ အလိုမကျတာတွေ့ရင် သူက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိနှင့်ပြီး သင့်မကျေနပ် ချက်တွေကို မေးမယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့အခက်အခဲတွေမကျေမနပ်ဆိုလာတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပြီးအကြံဉာဏ်ပေး မယ့်သူမျိုးပါ. ။
နေ့စဉ် အသက်ရှင်ဖို့ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဝဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ယောက်ထဲရင်ဆိုင်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ သင်က စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ တစ်ယောက်ထဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို
့ မတတ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာသူ ကသင့်ရှေ့ကမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။သင့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအားနည်းချက်လို့ အပြစ်မမြင်ပဲသူဘက်က ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်တောင်ဂုဏ်ယူဦးမယ့်သူပါ ။
၄။သင့်ရဲ့စိတ်ကို သိနေတဲ့သူမျိုး ။
သူက သင့်ကိုအရမ်းချစ် တဲ့အတွက်ကြောင့်သင့် ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ အကြိုက်တွေ ကိုအမြဲသိချင်နေတဲ့ သူမျိုးပါ။ သိဖို့အတွက် အမြဲလည်း အကဲခတ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိ လာတဲ့အခါမျိုး မှာတောင်းဆိုစ ရာမလိုပဲ သူ့အသိစိတ် နဲ့သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိနှင့်ပြီးသား၊ လုပ်ပေးနှင့်နေပြီ းသားဖြစ်နေ တတ်ပါတယ် ။
တခါတရံ လက်ဆောင်တွေ အစားအသောက်တွေ ဝယ်လာပေးတဲ့ အခါမျိုးကျရင် သင့်အကြိုက်နဲ့ထပ်တူ ညီနေတာမျိုး ရှိနေတတ် တာတွေက တိုက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အကြိုက်၊သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသိပြီး အသေးအဖွဲ့လေးတွေကအစ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သူမို့ပါ ….. ။ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။
၅။သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်မလှပဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူက ချစ်ပေးတဲ့သူမျိုး ။
သင်က လှပတဲ့သူတစ်ယောက်မို့သူက ချစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး သင်က ဗိုက်ပူခါးတုတ်နေနေရင်တောင်သူကအဲဒါလေးကို ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူမျိုးပါ။ သင့်မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံတွေများနေ လို့မှန်မကြည့်ချင် ဘူးဆိုရင်တောင်သင့်ကို သူက တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြီး ဝက်ခြံလေးတွေကိုတောင် မှဲ့လေးတွေလို့မြင်ပေး မယ့်သူမျိုးပါပဲ …။
အထိမ်းအမှတ်နေ့ရက်တွေ၊ဥပမာ-ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မျိုးမှာသူကသင့်နဲ့အတူ ဖြတ်သန်းချင်တာပါ။ သူက စိတ်ညစ်စရာအရာတွေသာသင့်ကို မပြောပြချင်နေမယ်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စ ဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေ ရှိလာတဲ့အခါကျရင်
သင့်ကို ပထမဆုံးပြောပြပြီး အပျော်တွေကို အတူတူမျှဝေချင် တဲ့သူမျိုးပါ။ အဲလိုကောင်လေးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးရင် သင့်ဘက်ကလည် းအပြည့်အဝနဲ့နားလည်မှု ပေးနိုင်တဲ့ချစ်သူ မျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့မမေ့နဲ့နော်။
မူရင်းရေးသားသူအားလေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါတယ်
မြန်မာပြည်ထဲက ရှိန်းခေါင်လို့ ခေါ်တဲ့ ရေခဲပြင်ပေါ်ကရွာလေးကို ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ………………………………… ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ ဇီးထန်အုပ်စုမှာရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ အလည်သွားချင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့အတွက် လမ်းကြောင်း ( ၂ )ခုဖြင့် ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ #အမှတ် ( ၁ ) လမ်းကြောင်း (တရုတ်ပြည်ထဲကို ပတ်ဝင်ပြီးမှ ရေခဲပြင်ရွာကလေးကို ရောက်နိူင်မယ့် လမ်းကြောင်းပါ) -မြစ်ကြီးနား – ဝိုင်းမော် – ဆဒုံး – ကန်ပိုက်တီ (တရုတ်နယ်ခြားဂိတ် မှ ကူရုန်း မှ -ဖီမော် – ဖူကုန်းမြို့ မှ ရှိန်းခေါင်ရွာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ #အမှတ် ( ၂ )လမ်းကြောင်း (မြန်မာပြည်တွင်း) – မြစ်ကြီးနား – ပူတာအို – မချမ်းဘော့ – […]